Baaris Akademiyeedka Cilmiga Bulshada: Casharkii 9aad | Laashin iyo Hal-abuur
doodda ku saabsan in labadooda la wada adeegsan karo waa mid dib ugu laabanaysa cilmibaareyaasha dersa siyaasadda iyo markii la helay sooftiweerka CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis System). Sooftiweerkan waxay u adeegsadaan kala soocidda xogta iyo macluumaadka tayada (Qaulitative Data), iyada oo u maraya habka tirada (Quantitative method). Sooftiweerka waxaa ku dhex jira barnaamij lagu lafaguro kelmedaha (Content analsis), waana mid lagu derso xogta ama macluumaadka aan ka baxsaneen xayndaabka hadalka iyo qoraalka (Talk and Text). Falanqaynta ku saabsan doodaha ku dulwareegta isticmaalka labadaas hab, ayaga oo faahfaahsan waxay ku dhigan yihiin buugga: ‘Quantity and Quality in Social Research’ ee uu qoray Alan Bryman. Isku day in aad akhriso buuggaas.